Brisas Group dia manokatra hotely Galería Plaza Collection vaovao any Mexico City
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Brisas Group dia manokatra hotely Galería Plaza Collection vaovao any Mexico City
Orinasa mandray vahiny Meksikana, Vondrona Brisas vao haingana no nanokatra ny trano fandraisam-bahininy vaovao, Galería Plaza San Jerónimo, any amin'ny faritra atsimon'ny tanànan'i Mexico. Ao anatin'ny fanangonana Galería Plaza, ity hotely ity dia miorina tsara eo akaikin'ny biraon'ny orinasa lehibe, ny toeram-pivarotana, ny trano fisakafoanana ary ny làlambe atsimo, izay manome fidirana mora mankany amin'ny tanànan'i Mexico rehetra.
"Faly be izahay fa hanokatra ny fanampim-baovao farany amin'ny fanangonana Galería Plaza," hoy ny Tale Jeneraly Rafael Gonzalez. “Galería Plaza San Jerónimo dia manolotra famolavolana ankehitriny, haitao manara-penitra, ary toerana tsara tsy azo resena ao amin'ny tanànan'i Mexico ny vahiny. Ity toerana ity dia mety indrindra ho an'ny vondrona, hetsika ary fivoriambe, ary manantena ny hahita ireo vahininay izahay. ”
Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fisintonana ireo mpanao dia sy mpizahatany miala voly eran'izao tontolo izao, Galería Plaza San Jerónimo dia trano fandraisam-bahiny maoderina izay manolotra ireo vahininy sy serivisy avo lenta ho an'ny vahiny.
Ny fanangonana Galería Plaza dia natokana ho an'ny fikarakarana ho an'ny mpanao raharaham-barotra na ho an'ny mpandeha fialan-tsasatra, miaraka amin'ny toerana any afovoan-tanàna tampon'ny Mexico. Ny toerana hafa dia ahitana ny Galería Plaza Reforma any Mexico City, Galería Plaza Irapuato ary Galería Plaza Veracruz.
Ankoatr'izay, ny Brisas Group dia manangana toerana fanampiny ankehitriny ao anatin'izany ny Galería Plaza Insurgentes, Galería Plaza Monterrey ary Galería Plaza León, izay kasaina hisokatra amin'ny 2021.
Nisokatra ny trano fandraisam-bahiny Brisas Group taorian'ny fanidiana nikatona noho ny areti-mandringana tamin'ny volana jolay 2020 miaraka amina kaody vaovao momba ny fahasalamana sy fiarovana mba hiantohana ny fiarovana ny vahiny